ANGANON’NY NTAOLO – Blaogin'i Voniary
Rev L. DAHLE sy JOHN SIMS – Trano Printy Loterana 1984
Misionera Norveziana no nanangona ireo anganon’ny Ntaolo sy fomban-drazana Malagasy araka ny fantany ka namintina azy amin’ny boky iray. Ireo angano ireo dia ahitana ny fahendrena nananan’ireo razantsika sy ny fahaizany mandaha-teny.
1.ANGANO SY ARIRA
Nino ny fisian’ny fiainan-tsy hita ny Malagasy, hita taratra amin’ny tantaran’IBONIAMASIBONIAMANORO izany. Mahagaga koa ny finoany fa nisy Zanak’Andriamanitra tonga teny an-tany nisolo heloka ny olombelona araka ny ambarany amin’ny tantaran’IFARALAHY DISO FANGATAKA. Mahatsikaiky, mahavariana, mampanonofy ary indrindra mampisokatra ny saina ireo angano isan-karazany : RAPETO SY RASOALAO, IKOTOFETSY SY IMAHAKA, ITOERAMBOLAFOTSY, IFARAMALEMY SY IKOTOBEKIBO sy ny maro hafa. Ny angano sy arira koa matetika entina itantarana fiandohan-javatra toy ny KITAY TELO AN-DALANA, NY NIFADIANA NY HEN’OMBY, NY NIOMPIANA NY ALIKA. Manaraka izany, mampahafantatra antsika ireo biby tena nisy na kihonohono koa ny tantara fohy toy ny : FANANIMPITOLOHA, NY KINAOLY, NY SONGOMBY, NY LALOMENA sy ny sisa
Sao varimbarian’ny lavitra isika tsy mahita ny ambany maso! Anisan’ny haren’ny kolontsaina Malagasy ny hain-teny. Misy ireo foronin’ireo mpikabary sy mpandaha-teny mba hifanaraka amin’ny vanim-potoana ankehitriny. Eo koa anefa ireo lova napetraky ny Ntaolo Malagasy izay toy ny fary lava vany ka tsy lany hamamiana. Azo ampiasana hatrany ny hain-teny amin’ny fotoana rehetra araka ny zava-misy : FANAMBADIANA, FAHORIANA na FAHAFATESANA. Eo amin’ny fiainana andavanandro koa dia azo atao ny mifampiresaka NY ATAO, NY ADALA, NY LAINGA ary NY HARENA amin’ny alalan’ny teny voalahatra amin’ny fomba kanto.
3. ANATRA FANAON’NY NTAOLO
Ny famindroana takariva eo amorom-patana no fotoana ifanakalozan’ny mpianakavy hevitra fahiny. Ireny indrindra no nararaotin’ireo Ray aman-dReny nampitàna hafatra sy nanabeazana ireo taranany. Sombintsombiny amin’ireny ary no aseho ao amin’ity boky ity : « Aza mba mivadika ny marina », « Ny an’ny tena no azo antenaina », « Fitandremana ny vava », sns.
4. HAIN-TENY SOMARY OHABOLANA
Azo itarafana ny soatoavina malagasy ireo ohabolan’ny Ntaolo. Ireny no nahitana ny fahaizan’ny Malagasy mandinika sy maka lesona amin’ny zava-misy, ny zava-boahary, ny biby sy ny zava-maniry. Misy lanjany ny teny eo amin’ny Malagasy ery entina hanasoavana ny mpiarabelona amin’ny alalan’ny fifananarana sy ny fifanabeazana izany.
5. LALAON’NY ANKIZY
Fanaon’ny ankizy fahiny ny milalao rehefa takariva diavolana. Nampiroborobo ny fifandraisana am-po teo amin’ny mpifanolo-bodirindrina sy ny mpiray tanàna izany. Na ny ankizy madinika na ny tanora dia samy revo rehefa raikitra ny FANATI-KIRA, FIANARA-MANISA, IZA IRY AMBONY IRY, SOAMIDITRA sy TSIKONONA.
Fahiny dia netin’ny Ntaolo ampivelarana ny sain’ny ankizy sy ny tanora ny fampanonona. Anisan’ny kilalao azo andaniana andro amin’ny fotoana rehetra izy io, ilay antsointsika hoe ankamantatra ankehitriny. Misy moa ireo ankamantratra moderina sy mifanaraka amin’ny toetr’andro ka manavanana kokoa ny ankizy amin’izao fotoana izao. Tsara ho tsaroana koa anefa ireo fampanonona nampifalifaly ireo Malagasy fahiny.
Aoka izay marani-tsaina ahay hifidy. Takaro ny hevitra ao ambadik’ireo sarin-teny isan-karazany. Alao izay ho anao : « Be maso anaty vero sa kely maso anaty vato ? », « Matavy tsy azo didiana sa mahia mitete menaka ? »
8. HIRAN’NY NTAOLO
Niangaly hira kanto ny Ntaolo fahiny, nentiny nananarana sy namitana hafatra : fihavanana, fanajan-dray aman-dreny, aza manafatra ny adala sy ny maro hafa. Ao koa ireo kalokalo fanao andavanandro eo am-panaovana lahasa toy ny hiran’ny mpiandry omby sy ny mpaka vilona, fangatahan-kitay ary ny hira fanaon’ny mpitari-bato.
…Angano, angano ! Arira, arira ! Izaho mpitantara, ianareo mpihaino !
angano malagasy, angano sy arira, kolontsaina, malagasy, ohabolana malagasy, teny gasy
7 commentaires sur “ANGANON’NY NTAOLO”
haja Rahaja dit :
Azafady sao mba misy manana ny tantaran’i Beby RAHARISOA tao anatin’ny boky Anganon’ny Ntaolo fanatontana voalohany fa toa tsy misy intsony ny fanatontana vaovao. Misaotra indrindra
Naly Jao dit :
Mbola anananay ato an-trano mihitsy io boky « Anganon’ny Ntaolo » io!Tena feno zava-mahaliana be ao anatiny!
Izaho aloha tena mamerina mamaky an’io boky io hatrany! Hahafantarana zava-baovao foana!
20 mars 2021 à 9 h 17 min
Azafady sao mba afaka mahazo io tantara io aho scanner-na raha azo atao fa mahakasika ahy manokana mantsy io tantara io.Misaotra tompoko.
Voararan’ny lalana ny manao an’izany fa ny mety dia ny mividy ny boky eny amin’ny fivarotam-boky raha azo atao
RAKOTOARIMAMONJY Hery Arnaud dit :
Salama jiaby, sao mba misy manana version pdf an’io boky azafady fa tena ilaiko ? Mankasitraka
19 mars 2021 à 6 h 04 min
Salama e! tsy misy version PDF io boky io raha ny fahalalako azy!